Blog - Page2of3- Active IT
Apple ၏ ထူးထူးဆန်းဆန်း အချက်အချို့
by thantsin | Nov 20, 2018 | Facts
အရမ်းအောင်မြင်တဲ့ ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုရဲ့ နာမည်ကို ဘာကြောင့် Apple လို့ပေးခဲ့လဲဆိုတာက လူတွေကြားမှာ စိတ်ဝင်စားစရာ တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီး ထင်ကြေးတွေလည်း အမျိုမျိုးပေးခဲ့ကြတဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခုပါ။ တကယ်တမ်းမှာတော့ Jobs ဟာ သစ်သီးကြိုက်သူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး သူကြိုက်တဲ့ ပန်းသီးကို ကုမ္ပဏီ...
၁။ အင်တာနက် တစ်ခုလုံးကို လူခုနှစ်ယောက်က ထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။ စတာမဟုတ်ပါဘူး၊ တကယ်ပဲ Internet Corporation for Assigned Names and Numbers(ICANN) လို့ခေါ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းမှာ မတူညီတဲ့ Key တစ်ခုစီနဲ့ လူခုနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ အကယ်လို့ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး တစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်...
၁။ Email စနစ်ကိုစတီထွင်ခဲ့တဲ့ Ray Tomlinson ဆိုတဲ့ အမေရိကန်လူမျိုး ပရိုဂရမ်မာတစ်ယောက်က ကမ္ဘာပထမဆုံး Email ကို ၁၉၇၁ ခုနှစ်မှာ ပို့ခဲ့ပါတယ်။ ၂။ Instagram ပေါ်မှာ တစ်နေ့ကို ဓါတ်ပုံပေါင်း ၉၅ သန်းလောက်တင်နေပြီး ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းသောပုံတွေဟာ ဘယ်သူမှ မမြင်လိုက်ကြပါဘူး။ ၃။...
IT လောကမှ ထူးထူးဆန်းဆန်း အချက်များ (၂)
by thantsin | Oct 24, 2018 | Facts
၁။ ပုံမှန်လူတစ်ယောက်ဟာ တစ်မိနစ်ကို အကြိမ် ၂၀ ခန့် မျက်တောင်ခတ်ပေမဲ့ ကွန်ပျူတာ အသုံးပြုနေချိန်မှာတော့ တစ်မိနစ်ကို ၇ ကြိမ် လောက်ပဲ မျက်တောင်ခတ်ပါတယ် ၂။ မိုက်ကရိုဆော့(ဖ်) ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင် ဘီ(လ်) ဂိတ်နေတဲ့အိမ်ပုံစံ ဒီဇိုင်းကိုတော့ Apple ရဲ့ Macintosh ကွန်ပျူတာထဲမှာ...
IT လောကမှ ထူးထူးဆန်းဆန်း အချက်များ (၁)
၁။ ကမ္ဘာပထမဆုံးကွန်ပျူတာ ENIAC ဟာ ၂၇ တန်လေးပြီး 1800 sqft လောက်နေရာယူပါတယ်.. ၂။ ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိသမျှပိုက်ဆံအားလုံးရဲ့ ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းလောက်သာ ငွေစက္ကူအနေနဲ့ ရှိပြီး ကျန်တဲ့ဟာတွေကတော့ ကွန်ပျူတာတွေထဲမှာ ကိန်းဂဏန်းတွေအဖြစ်ပဲရှိတာပါ ၃။ နည်းပညာ ကုမ္ပဏီကြီးတွေဖြစ်တဲ့ HP,...
ပညာရပ်အသစ်တွေကို ပိုပြီး မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ ထိထိရောက်ရောက် ဘယ်လိုသင်ယူကြမလဲ ?
by thantsin | Oct 23, 2018 | General
ကျွန်တော်တို့ ဖြတ်သန်းနေရတဲ့ ခုခေတ်ကြီးကို ပညာရှင်တွေက ပညာခေတ်ရယ်လို့ တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြတယ်.. လက်နက် နိုင်ငံခေတ်၊ ငွေဝယ်ကျွန်ခေတ်၊ အရင်းရှင်ခေတ်၊ ဘာခေတ်၊ ညာခေတ် စတာတွေကို ကျော်လွန်ခဲ့ပြီး တခြားအရာတွေထက် ပညာက ပိုအရေးပါ အရာရောက်တဲ့ ခေတ်ကို ရောက်လာပြီလို့...
Programmer တစ်ယောက် အဖြစ်အသက်မွေးတော့မယ်ဆိုရင် – ၁
by thantsin | Oct 16, 2018 | Developer
Language ရွေးချယ်ခြင်း ဒီရက်ပိုင်းဘယ်လိုဖြစ်တယ်မသိဘူး.. Chat Box နဲ့ ဖုန်းနဲ့ စသည်ဖြင့် လာလာမေးကြလွန်းလို့ပါ.. ထုံးစံအတိုင်းပဲ Java ကပိုကောင်းတယ်ဆို C# ကပိုကောင်းတာဆိုတာမျိုးတွေပါပဲ.. အစ်ကိုပဲ တစ်ခုရွေးပေးလိုက်တော့ ဆိုတာကပါသေးတယ်… ဘယ် Language ကပိုကောင်းတာလဲ?...
လူကြီးတို့၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ အယူအဆများ
by thantsin | Oct 15, 2018 | General
သင့်အမေဖုန်းထဲမှ နာရီကို အချိန်မှန်အောင်တိုက်ပေးပြီး နောက်ပိုင်း သူ့ ဖုန်းတွင် ဖြစ်သမျှ ပြဿနာအားလုံးသည် သင့်တာဝန်သာဖြစ်သည်.. . ဘီ(လ်) ကုန်သွားသဖြင့် Newsfeed တွင် သတင်း အသစ်မတက်တော့ခြင်းသည် ဖုန်းပျက်နေခြင်းဖြစ်သည်.. ထိုမှ တစ်ဖန် Airplane Mode ကြီးယောင်ရမ်းပြီး...
ကွန်မန့်တွေထဲ ‘GRATULA’ , ‘XOXO’ စတဲ့စာတွေရိုက်ကြည့်လို့ စာသားတွေ အရောင်ပြောင်းသွားရုံနဲ့သင့် အကောင့်ဟာတကယ်ပဲလုံခြုံနေပြီလား ..
by thantsin | Oct 14, 2018 | General
ဒီနေ့တစ်ယောက်က လာမေးလို့ပါ… ခုတလော အကောင့်တွေ Hack ခံရတဲ့ သတင်းတွေကလည်း ဟိုးလေးတကျော်ကျော် ဖြစ်နေတော့ ကွန်မန့်တွေထဲ အဲ့လိုစာတွေ ရိုက်လို့ အရောင်ပြောင်းသွားရင် သူ့ အကောင့်ဟာ Hack ခံရမှာ စိတ်ပူစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်တဲ့.. ပြောသေးတာ သူကတော့ ကြုံတိုင်း စစ်ပါတယ်တဲ့.....
ကလေးတွေကို ကွန်ပျူတာသင်တန်းပို့သင့်ရဲ့လား ?
by thantsin | Oct 8, 2018 | General
ဒီနေ့ ကလေးမိဘ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်နဲ့ စကားစပ်မိလို့ပါ .. မိတ်ဆွေလုပ်တဲ့လူကမေးတယ် “မင်းကွန်ပျူတာသင်တန်းမှာ ကလေးအတန်းတွေလည်းဖွင့်တယ်ဆိုတော့ ကလေးတွေအတွက် တကယ်ရော လိုလို့လားတဲ့”.. အမှန်တော့ သူဆိုလိုချင်တာက ဒီကလေးတွေကို ကွန်ပျူတာသင်ပေးလို့ ဘာအကျိုးရှိမှာလဲပေါ့ .. အားနာလို့...